Connectors Vagadziri - China Connectors Fekitori & vanotengesa
✭Nekuenderera mberi kwekuwedzera kwemusika wemarobhoti, makambani mazhinji ekugadzira marobhoti akatanga makwikwi anotyisa kwazvo. Hupenyu hwebasa rerobhoti, kudzikisa ruzha rave dambudziko rakakura rehunyanzvi. Iyi chikamu cheiyo diki chaiyo servo servo inoita basa rakakosha kwazvo, nekuti mubatanidzwa wega we robhoti unoda servo kuti uwane zviito zvakasiyana.
✭Yedu yepurasitiki chikamu chikamu chedzimba cheiyo servo yekufambisa giya, uye zvinhu zvepurasitiki zvinoshandiswa zvakakwirira-kuita PA66 + 30GF zvinhu. Pasi pechiitiko chemagiya eiyo servo yekufambisa giya, inogona kuve nechokwadi chekuti danda repurasitiki harigone kumira uye kuramba rakadzikama panguva yekufamba kwemagiya. Iyi ganda repurasitiki rine zvakakwirira kwazvo zvinodikanwa kuti huchokwadi hwehuvhu, kunyanya kuenzana kushivirira kwegiya rekumisikidza gomba, kuve nechokwadi kuti iri mukati mekushivirira renji ye055mm. Zvinhu zvedu zveforoma zvinogadzirwa zvichishandiswa zvakatengwa kubva kuBecu uye S136.
✭Iri ganda repurasitiki rinoumbwa nematatu epurasitiki, goko repamusoro, repakati goko uye rakadzika goko. Iwo anofanirwa kunge achifananidzwa zvakakwana kuti ave nechokwadi chekuti nzvimbo yepakati yegiya yekumisikidza gomba inoenderana. Naizvozvo, yerudzi urwu rwechokwadi epurasitiki zvikamu, iyo mhango mhango inongova 2, kuitira kuti saizi inogona kudzorwa zvirinani.